Teeth Healthy | Nzira Yakanakisisa kuzvichenesa zvikadaro Mazino Guide
Posts tagged "mazino utano"
Kuwana mazino ako kunogona kutora mari yakawanda uye nguva yakawanda. Pane zvakawanda nzira uye zvigadzirwa kuti kutenga nhasi kuti kuzvichenesa zvikadaro mazino ingabva ose mishonga chaiyo ichangobva muna technology.This Nyaya icharatidza mumwe kuverenga kana uchida vakaedzwa mazino-zviitwe mazano anoshanda nokukurumidza uye zvinobudirira.
Nokuti uchitsanya zvabuda, tsvakai nyanzvi zviitwe mabasa. Vanogona kuva kutora mashoma pfupi kushanya, uye migumisiro inoshamisa richagara kuva kwenguva yakareba. Mazino rakanga rachena wemisanganiswa kuti vanachiremba vemazino enyu ane kuwana zviri zvikuru kunobatsira kupfuura zvaunogona kuwana pana zvinodhaka chitoro yenyu.
ZANO! Kuti tirambe akachena, Cleaner mazino, dzose mazino cleanings ndivo kunofanira. Iva nechokwadi kuti kufambirana mwedzi pakugadza enyu matanhatu kuronga nguva yakawanda pachine.
A shoma mazino kushanyira mazino ako akachena. Vanachiremba vemazino vanogona kushandisa rakanga rachena mazino pachishandiswa zvisingagoni kutengwa pamusoro-the-pakaunda.
Unogona kushandisa mastrawberry kuti kuzvichenesa zvikadaro mazino ako. The makemikari hunoumba pamusoro mastrawberry kunogona kubatsira kuzvichenesa zvikadaro mazino ako pasina makemikari utsinye. Puree mastrawberry kuti mukaravhani mushonga wemazino, kana inotapukira matsva mastrawberry zvakananga mazino ako.
ZANO! Raw zvokudya, kunyanya michero nemiriwo kuchengeta mazino enyu utano. Kupatsanurwa uye hakuvaki zvokudya kwete chete kutendeuka mazino enyu yero, asi kunogonawo kukonzera in.
Lemons uye maranjisi kukupai vhitamini C, asi ivowo vane zino-rakanga rachena properties.Rub mukati svuura pamusoro mazino enyu nokuda kwounyengeri zviitwe maturo. Unogona kuwedzera zvishoma munyu kuti rinokwatuka kuvandudza migumisiro zvinoonekwa kuti nzira iyi kuuya.
Shandisa mirayiridzo yaisanganisira pamwe zviitwe zvinogadzirwa. panzvimbo, rinogona kukonzera chingamu uye muromo bundu, uye kunyange kukonzera hombe mazino kukuvadza. Shandisa mazino rakanga rachena zvigadzirwa chaizvo uye chete sezvatinorayirwa pamusoro pasuru.
ZANO! A nyore asi ichibudirira dzinongoitika fuma iri kubikira pasoda. Yakavhenganiswa nemvura, rinogona kubatsira kuzvichenesa zvikadaro mazino ako.
Chinhu chokutanga chinokosha kana kuedza kuchengeta mazino wako kuwana zvakakodzera mazino cleanings. Wana mazino enyu vakachenesa mwedzi mitanhatu ose uye kuti kugadzwa wauchazoroorana apo muhofisi wako kuchenesa uno.
Chinhu chakanakisisa chaungaita kuti kuva akachena kunyemwerera ndiko kuti nguva kushanyira chiremba wemazino renyu cleanings. Vanogara kuronga cleanings izvi kaviri pagore. Kana aita dzako rokutsvaira, akamisa kugadzwa yako kutevera saka urege kukanganwa. Get hofisi wako akupe chiyeuchidzo runhare.
ZANO! Mazino rakanga rachena mushonga wemazino hauna zvakawanda zvakasiyana nokugara mushonga wemazino. Hazvisi zvechokwadi pfungwa yakanaka kupambadza mari pazvinhu zvisingashandi kuti haasi kuita zvakawanda musiyano.
Idya zvokudya utano; zvokudya mbishi kufanana michero akakwana mienzaniso. Garai kure vemhando iyi zvokudya nechokwadi mazino ako mazino utano. Unofanirawo kudzivisa snacking apo aiming nokuti akanaka uchinyemwerera.
Kunwa kuburikidza ane uswa ndechimwe zhinji mazano diki chingatibatsira kuramba mazino akachena. Kana ukashandisa uswa, nemvura kashoma kuuya neVadzidzi pose mazino ako. The mvura kuchaita yokunzvenga mazino ako uye kuburuka huro yako.
ZANO! Hwokuwana tirambe mazino machena, kukwesha uye floss mazino enyu ose zuva musingadariki. Kana ukaita izvi, zvichaita kubvisa mashoko anovaka pamusoro nebheji chinokonzera zino discoloration.
Zvinonyatsozivikanwa rakanyorwawo chokwadi kuti utsi hwefodya rakabudiswa fodya discolors mazino ako nguva dzose iwe fema.
Kuva rakanga rachena zvinoitwa chiremba wemazino wako zvechokwadi zvinoenderana nokukurumidza sei unofanira zvawanikwa, uye sei zvakaipisisa mazino enyu yakasvibiswa. Kunyange izvi zvichava anodhura, unogona anopedzisira anokurumidza, zvaitoshamisa zvawanikwa kupfuura ungave nepariri zvimwe rakanga rachena unyanzvi.
ZANO! waini tsvuku connoisseurs, kunyanya vaya imbibe nguva dzose, vanowanzoda kuti zino discoloration. Waini tsvuku ruvara wefodya unopinda mazino wacho enamel unoita kuti zvasviba.
toothpastes dzose uye rakanga rachena mazino pastes vari hazvishamisi similar.You hazvidi kupedza chigadzirwa iyo hazvichinji yakachenesesa nemazino ako. Unenge kutambisa nguva yako uye mari kuti haakupi mugoropafadzwa.
Kana uchisvuta, ipapo unofanira kurega kuva chero mukana rakanga rachena mazino ako. A nyanzvi zviitwe nzira kunodyira chinokosha mari. Kana uine rakadaro muitiro aita uye ipapo mudzanga, makarasira kuti mari kure. The zviitwe vachakundwa nokukurumidza kunoshandurwa kubudikidza kusvuta.
ZANO! Zvakakosha kukwesha, pamatadza masaja, uye floss kaviri pazuva kanenge. Kukwesha uye flossing kutevera ose tudyo uye kudya kunogona kubatsira mazino enyu kugara chena.
Kukwesha mazino ako pashure kudya zvakarurama chinhu chinokosha pakuzvichengeta kubva discoloring. Ichi ichokwadi kana totaura kofi.
Kumbira chiremba wemazino kwenyu rakanga rachena Ngirozi auchashandisa pamba kuti yakajeka kunyemwerera kwako. Nzira iyi kunosanganisa wemazino ichipa iwe nomuromo tireyi kuti uchava kuzadza pamwe Ngirozi uye anoshanda mazino enyu imwe nguva mumwe usiku kwevhiki dzinoverengeka. Zvinofanira akati unyanzvi ichi ungagona kuzvichenesa zvikadaro kunyemwerera kwako noruvara anosvika masere yakajeka.
ZANO! Kana uri Parizvino pamuviri, dzisashandisa chero mazino rakanga rachena zvinogadzirwa! zvinogadzirwa izvi’ zvimwe kungava kukuvadza mwana wako achikura. Rakanga rachena toothpastes kazhinji kunaka kushandisa panguva pamuviri, asi bvunza chiremba wako kana chiremba wemazino kuva nechokwadi.
Imwe yenzira nechokwadi mazino wako pedyo vane dzose kugadzwa Pakushanyira wemazino kuchenesa navo.
Edza kushandisa mouthwash kuti unyanzvi vari zviitwe. Zvinogona kutora mwedzi kuwana mhinduro. mouthwashes izvi zvine makemikari rakanga rachena inonzi rehydrogen peroxide. Zviri nyore chaizvo kuti kushandisa. Simply sukurudza nayo kaviri pazuva inenge hafu kweminiti usati kukwesha mazino enyu.
ZANO! Flossing kunokosha. Flossing kunobatsira kubvisa nebheji, izvo zvinogona kukonzera discoloration mazino ako.
Kudya maapuro inzira huru kupa mazino enyu fungidziro yokuva akachena kupfuura chaizvo. Crunchy zvokudya uye miriwo une hasha unhu hunogona kukubatsira kuchenesa mazino ako vasina kukuvara zvikuru pamusoro enamel yako.
Kuzvichenesa zvikadaro mazino ako nenzira sezvechinyakare kuburikidza vachidzipukuta walnuts omuti. Vachidzipukuta izvi mazino enyu kwazvo vanorichenesa navo uye anoita kuti ndichene. Iva nechokwadi kurigeza muromo wako kubva pakushandisa kuhukura, uye zvadaro kukwesha.
ZANO! Vapedzei makuru kwazvo dheri zvokudya. Foods somukaka, chizi uye yogati vose vane zvicherwa anogona kukubatsira kukupai simba, mazino anoyevedza kuti zvamunoda.
Unogona kushandisa rehydrogen peroxide kuti kuzvichenesa zvikadaro mazino ako. Unogona kuita izvi nokungosaina Anonyudza ane washcloth kana donje zvinhu vakanyika kupinda mhinduro. Inotapukira nemadhaka jira pamusoro dzine mazino ako waita kuneteswa izvozvo. The peroxide kushandira kurerutsa echitema uye jira kunobatsira muvatakure.
Shandisa Bay mashizha uye Orange rinokwatuka kuti upfu. Add mvura upfu iyi uye bhurasho pamwe muvhenganiswa ichi. Mukuwedzera rakanga rachena mazino, ichi chichabatsira kudzivisa chingamu chirwere uye in.
ZANO! The kuhukura kubva walnuts muti unogona kushandiswa senzira mazino whitener. Vachidzipukuta ari nemakwati mhiri mazino hukawanika zvichabatsira kuti kusimudza echitema uye yellowish firimu nemazino ako.
Kana mazino wako ruvara chichikusvota, bvunza chiremba wemazino renyu zvaungasarudza. Vamwe vanhu vanofunga rakanga rachena mazino chinhu pfachura mari, kunyange kana une meno kure chitsvuku anotanga kuchinja sei iwe kurarama upenyu hwako, kungava kwakakodzera nokuti aigona kuvaka wako nechivimbo.
Usati vanoedza mazino rakanga rachena uri woga, nguva dzose iva nechokwadi kubvunza kutanga chiremba wemazino wako. Dzimwe nguva Stained mazino zvinogona yakatarwa nemafungiro ane utsanana nani. Bvunza chiremba wemazino wako nezvomukana kushandisa rakanga rachena zvinogadzirwa. chiremba wemazino Your anogona mazano kana muromo wako uri mamiriro kutanga kushandisa mhando izvi mishonga. In kana chingamu chirwere zvichaita chete kuva kuipa kana ukashandisa mazino rakanga rachena chigadzirwa pamusoro pavo.
ZANO! Unofanira kudzivisa kofi netii kana uchida kuchengeta kunyemwerera kwako chena. Kunwa yakawandisa inogona, kupfuuridza nguva, kukonzera zvinokosha staining.
Kana uchida mazino akachena, kushandisa nguvo Vaseline kuti mazino enyu. Zvingasava vasina yakanaka munuhwi, asi achapa rwokudzivirira chinodzivirira pakati pameno enyu uye echitema kwemaawa anoverengeka.
Mushure kudya, kutsenga vamwe chingamu kubatsira kuzvichenesa zvikadaro uye kuchenesa mazino ako. Vamwe kutsenga mazino vari kunyanya achibudiswa kuzvichenesa zvikadaro mazino, uyewo varambe chena. mazino izvi inoratidza zvinhu aizonyatsovachenesa-kurwa kuti achachengeta mazino enyu ikapenya. Kutsenga chingamu unoberekawo dzinongoitika mate zvichakubatsira kugeza chero zvokudya inoramba nemazino ako.
Yellow mazino chiri nyore kuoneka chiratidzo munhu kuti anosvuta mabhokisi. Zvinogona nani zvakaoma kuchengeta mazino machena kunyemwerera kana uchisvuta. Kana uine kusvuta, unofanira zvachose kuderedza zvakadini uchisvuta kubatsirwa utano hwako uye hwako achinyemwerera.
Kumbira chiremba wemazino yako kana anogona kukupa Ngirozi zvinogona kushandiswa pamusha zviitwe Kit. Nzira iyi ungagona kuzvichenesa zvikadaro mazino vako noruvara anosvika masere yakajeka.
Kana uchida mazino enyu ndichene, unofanira kuva nguva mazino kuchenesa kugadza. Kugara mazino cleanings ari pakati inonyatsobudirira nzira unogona kusanganisira nemazino ako rakanga rachena poda. Unofanira kushanyira chiremba wemazino yako kanenge kaviri pagore.
Rakanga rachena nengirozi dziripo kuti kuzvichenesa zvikadaro mazino ako akachena. Unogona kutenga nengirozi idzi panguva zvinodhaka zvitoro uye vane isingadhuri pane kuroora mazino ako whitened nokuda chiremba wemazino. Kana mazino ako kutarira hakuvaki kana rakabuda ruvara chaizvo, unofanira kuenda kutanga wemazino.
Kukwesha mazino enyu pamusoro uchimuka, uye pamunongopinda uchida kuenda kunorara kuona mazino enyu kuwana akachena.
Mouthwash anogona chaizvoizvo kusimudzira discoloration mazino enyu discoloration.Ask chiremba wemazino yako kana hamuna mazino anogona kutsungirira migumisiro yokushandisa mouthwash.
Rehydrogen peroxide haisi yakachengeteka nzira kuzvichenesa zvikadaro mazino. Hazvina kunaka uye zvinogona mukasiya mazino ako kuti ave mberi rakabuda ruvara. Dzivisa zvigadzirwa zvose kuti ane rehydrogen peroxide kana mazino enyu havana utano zvakakwana.
Zvinokurudzirwa zvikuru kuti iwe mazino ako whitened asati kuwana waya braces.You achava vanofara kana ukaona kunyemwerera yako itsva zvachiri Kunyemwerera straighter uye akavandudzika!
Vanachiremba vemazino vanogona kushandisa nyanzvi bleaching zvinhu pamwe chaiwo zviedza zvinogona kuzvichenesa zvikadaro meno sezvinongoitawo 15 noruvara nokukurumidza. Kwakadai nzira kazhinji mari kumativi mazana mashanu emadhora wechikamu.
Kana mazino enyu nguva dzose kutarira yakagomara kana tsvuku dzakaita, funga kana vaunofarira zvinodhaka aigona kuva kupomera. Red waini uye kofi zvinozivikanwa kuti aizonyatsovachenesa mazino. Shandisa uswa apo vachinwa doro izvi kuti nevandagara nguva meno kuonana.
Ita Strawberry pachako mushonga wemazino yako Kukwesha mazino. Mastrawberry muri rakanga rachena zvazvinoita mazino ako. Kusanganisa dzimwe namatidza pachako, sangana mvura (1/4 mukombe), soda yekubikisa (1/2 mukombe) mastrawberry uye nhatu kuti vave mashed.
rakabuda ruvara Mazino
Unogona kuita mazino enyu vane akachena chitarisiko nokupfeka yakakodzera mumvuri lipstick ruvara. Piriviri lipstick achaita rakabuda ruvara meno nokuti vanowanzotevedzera kutarisa zvasviba. Yakanakisisa Mavara nokuda rakabuda ruvara meno pinks kana mushwi noruvara.
Kuwana mazino machena uchida unogona kuva dzinodhura uye yakati ane dzichikunetsa. Pane zvakawanda nzira iripo vachiita yako kuita kwokusiya mazino akachena. Shandisa Mazano aisa panze pano, saka unogona kuzvichenesa zvikadaro mazino enyu pasina kuwana muitiro aita nenyanzvi nachiremba wemazino.
Posted by kuzvichenesa zvikadaro Mazino Guide - Chikumi 5, 2016 pa 12:44 AM
Categories: Kuzvichenesa zvikadaro Mazino Tips Tags: Dazzle Smile, Smile Dazzle, mazino utano, mazino shora, vhitamini C